views:0 Author:ဆိုက်ကို Editor ကို အချိန် Publish: 2021-09-20 မူလ:ဆိုက်ကို
ဓာတ်ငွေ့မီးစက်အမျိုးမျိုးသောသဘာဝဓာတ်ငွေ့အမျိုးမျိုးကိုလောင်စာအဖြစ်အပြည့်အဝအသုံးချပါ။ ၎င်းတို့သည်လုံခြုံစိတ်ချရသောနှင့်အဆင်ပြေသောလည်ပတ်မှု, ကုန်ကျစရိတ်သက်သာခြင်းနှင့်ထုတ်လွှတ်မှုညစ်ညမ်းမှုနည်းခြင်းနှင့်အပူနှင့်စွမ်းအင်သုံးစွဲမှုအတွက်သင့်တော်သည်။ ထို့ကြောင့်ဓာတ်ငွေ့မီးစက်အစုံများ၏စျေးကွက်အလားအလာသည်အလွန်ကျယ်ပြန့်သည်။ ကျွန်ုပ်၏နိုင်ငံ၏ကြွယ်ဝသောသဘာဝဓာတ်ငွေ့သယံဇာတများနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်ကျွန်ုပ်၏တိုင်းပြည်၏စွမ်းအင်သုံးစွဲမှုတွင်သဘာဝဓာတ်ငွေ့အချိုးအစားသည်သေးငယ်လွန်းပြီးအနာဂတ်တွင်သိသိသာသာတိုးပွားလာနိုင်သည်။ လက်ရှိသဘာဝဓာတ်ငွေ့စွမ်းအားမျိုးဆက်များကိုရေနံ, သဘာဝဓာတ်ငွေ့လယ်ကွင်းများ, လေဆိပ်များ, ဟိုတယ်များနှင့်ဆေးရုံများတွင်အဓိကအားဖြင့်အသုံးပြုသည်။ သဘာဝဓာတ်ငွေ့များများစားစားတိုးများလာသည်နှင့်အမျှပံ့ပိုးမှုအတိုင်းအတာတိုးများလာသည်နှင့်အမျှသဘာဝဓာတ်ငွေ့စွမ်းအားမျိုးဆက်သည်မကြာသေးမီနှစ်များအတွင်းသဘာဝဓာတ်ငွေ့သုံးဓာတ်အားပေးစက်ရုံတိုးပွားလာလိမ့်မည်။ အောက်ဖော်ပြပါအချက်များသည်သင့်အားဓာတ်ငွေ့မီးစက်အစုံအလင်နှင့်သက်ဆိုင်သည့်သတင်းအချက်အလက်များကိုမိတ်ဆက်ပေးလိမ့်မည်။
Aဓာတ်ငွေ့မီးစက်Set သည်ကမ္ဘာ့ပတ်0န်းကျင်ဆိုင်ရာကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးလိုအပ်ချက်များနှင့်စျေးကွက်ဝန်းကျင်အသစ်နှင့်လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်ပြုလုပ်ရန်တီထွင်ထုတ်လုပ်နိုင်သည့်ပုံစံအသစ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ဓာတ်ငွေ့ Generator အစုံများကိုအဓိကအားဖြင့်နှစ်မျိုးခွဲခြားထားသည်။ ဓာတ်ငွေ့တာဘိုင်များသည်အတော်အတန်ကြီးမားပြီးအကြီးစားနှင့်အလတ်စားဓာတ်အားပေးစက်ရုံများတွင်အသုံးပြုသည်။ ၎င်းသည်ရေနံနှင့်ကျောက်မီးသွေးသုံးရာယူနစ်များကိုအစားထိုးသောအစိမ်းရောင်နှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးစွမ်းအင်အမျိုးအစားအသစ်ဖြစ်သည်။
ဓာတ်ငွေ့မီးစက်အစုံများသည် output output power range, start-up နှင့်လည်ပတ်မှုယုံကြည်စိတ်ချရမှု, ကောင်းမွန်သောစွမ်းအင်မျိုးဆက်အရည်အသွေး, ပေါ့ပါးသော,
ကတည်းကဓာတ်ငွေ့မီးစက်အလုပ်မလုပ်သည့်အခါပြောင်းရွှေ့နေသည့်အခါပြောင်းရွှေ့ပါက Esc သည်အမြန်တုန့်ပြန်မှုမြန်နှုန်းရှိပြီးအလုပ်သည်အထူးသဖြင့်တည်ငြိမ်သည်။ မီးစက်၏ output voltage နှင့်ကြိမ်နှုန်းသည်မြင့်မားသောတိကျမှုနှင့်သေးငယ်သောအတက်အကျရှိသည်။0န်ဆောင်မှုသည်ရုတ်တရက် 50% နှင့် 75% တိုးတက်လာသည်။ ဒီဇယ်လ်မီးစက်အစုံများ၏လျှပ်စစ်စွမ်းဆောင်ရည်ညွှန်းကိန်းများထက်ယူနစ်သည်အလွန်နည်းပါးသည်။
အောင်မြင်သောအအေးမိခြင်းမှအပြည့်အဝ0င်ရောက်ရန်ဓာတ်ငွေ့မီးစက်ရရန်အချိန်သည်စက္ကန့် 30 သာဖြစ်သည်။ ဓာတ်ငွေ့မီးစက်အစုံသည်ပတ်ဝန်းကျင်အပူချိန်နှင့်ရာသီဥတုအခြေအနေအောက်တွင်အောင်မြင်မှုနှုန်းကိုအာမခံနိုင်သည်။
ထိုကဲ့သို့သောဓာတ်ငွေ့, Platycodon, Biogas စသည်များစသည့်ဓာတ်ငွေ့မီးစက်သည်လောင်စာဆီအဖြစ်အသုံးပြုသည်။
1. ဓာတ်ငွေ့မီးစက်၏အင်ဂျင်ခန်းသည်ပွင့်လင်းသော flame ရိယာနှင့်ဝေးကွာသင့်သည်။
3. ဓာတ်ငွေ့မီးစက်တပ်ဆင်ထားသည့်အခါကိုယ်ထည်နှင့်ဖောင်ဒေးရှင်းကိုသံချပ်အင်္ကျီများနှင့်ညှိနှိုင်းသင့်သည်။ အဆက်အသွယ် area ရိယာသည် 60% ကျော်ဖြစ်သင့်ပြီးဖြန့်ဖြူးမှုပင်ဖြစ်သင့်သည်။
4. အလင်းရောင်, switches, ဝါယာကြိုးနှင့်လျှပ်စစ်ပစ္စည်းများကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားပါ။
7 ။ 60kw အထက်ရှိဓာတ်ငွေ့မီးစက်များသည်3လက်မနှင့်2လက်မအသီးသီးရှိသည်။ နှင့်ဓာတ်ငွေ့အဆို့ရှင် (သံမဏိဘောလုံးအဆို့ရှင်အဆို့ရှင်) ကိုတပ်ဆင်ရမည်။
8. လောင်စာဆီဓာတ်ငွေ့သည်လူဆိတ်ညံသော, ရေဓာတ်ခန်းခြောက်ခြင်း,
MECCA Power သည်အရေးပေါ်အခြေအနေသို့မဟုတ်အထွေထွေလျှပ်စစ်ထောက်ပံ့ရေးဖြေရှင်းနည်းများနှင့်စနစ်ပေါင်းစည်းမှုဆောက်လုပ်ရေးဆောက်လုပ်ရေးအတွက်လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်သည့်အဆင့်မြင့်အရေးပေါ်စွမ်းအင်ထောက်ပံ့ရေးစနစ်ဖြေရှင်းသူဖြစ်သည်။ ထုတ်ကုန်များတွင် Diesel Generator Sets, Generator Sets, ရေဂျုံစက်များ, အအေးခံထားရသောစက်ခေါင်းများနှင့်အခြားထုတ်ကုန်များပါဝင်သည်။ ပိုမိုသိရှိလိုပါကကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီဝက်ဘ်ဆိုက်ကိုသင်ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်သည်။
သဘာဝဓာတ်ငွေ့မီးစက် ဇီဝကာမီးစက် အရည်ရေနံဓာတ်ငွေ့မီးစက်အရည် စက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်ဓာတ်ငွေ့မီးစက် လျှပ်စစ်ဓာတ်ငွေ့မီးစက် စက်မှုလုပ်ငန်းများအတွက်ဓာတ်ငွေ့မီးစက်